फेरिन खोजेको जनकपुर- विविधा - कान्तिपुर समाचार
नेपालको जस्तोसुकै ठाउँमा पनि रामाशिष जस्ता मानिस हुनसक्छन्, जो आफ्नो समाज र देशलाई निस्वार्थ भावले सेवा गरेर अगाडि बढाउने मनसाय राख्छन् ।
फाल्गुन १०, २०७६ प्रमोद मिश्र
रामायणको जनकपुरबारे सानैदेखि सुनेपढे पनि म एकपटक मात्र गएको थिएँ, छत्तिस साले विद्यार्थी नेता तथा मेरा मित्र एवं सहकर्मी कैलाश कार्कीको विवाहमा । जनकपुरबारे मैले रिचर्ड बर्गहार्डको धर्मनिरपेक्ष भएर लेखेको प्राज्ञिक लेख पढेको थिएँ । र, दुर्गानन्द झाले राजा महेन्द्रमाथि बम प्रहार गरेको बदला पञ्चायती व्यवस्थाले जनकपुरलाई पिछडा बनाएको भन्ने आशयका लेखहरू पनि नपढेको होइन ।
पछिल्लो समय मैले जनकपुरबारे सकारात्मकभन्दा नकारात्मक कुरा नै पढेको र सुनेको थिएँ । बम बिस्फोटमा मैथिली नाट्यकर्मीको मृत्यु, रेडियोमा काम गर्ने एउटी होनहार महिलाको हत्या, सञ्चार व्यवसायीको हत्या आदि । जनकपुरमा कस्ता मानिस बस्दा हुन्, जो आफ्ना मतभेद छलफलद्वारा समाधान गर्न सक्दैनन् भन्ने लागेको थियो । राजधानी बनिसकेपछि पनि मैले जनकपुरवासीबारे नकारात्मक कुरा नै सुनेको थिएँ । जनकपुर फोहोर छ, त्यहाँ सुन्न सक्ने संस्कार छैन । जनकपुरवासी नकारात्मक कुरामात्र गर्छन् । अरूको कुरा काट्न र खुटटा तान्नमात्र आफ्नो समय खर्चिन्छन् आदि–इत्यादि ।
त्यसैले जब गत दिसम्बरमा झापादेखि कैलालीको मधेस यात्राको एघारौं दिन मधेस फाउन्डेसनका तुलानारायण साह र म ठाडी झिझा अनि सहिदहरूको गाउँ यदुकहा हुँदै जनकपुरतर्फ लाग्यौँ, मेरा मनमा अनेकौं कुरा खेल्न थाले । जनकपुरको वातावरणीय र मानसिक फोहोर हेर्न किन जाऊँ भन्ने पनि लाग्यो । तर जनकपुर प्रदेश नम्बर २ को राजधानी भएकोले त्यहाँ महिला, दलित र युवा रोजगारका लागि अनेकौँ राम्रा काम गरिरहेका मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतलाई भेटने इच्छा थियो । फेरि इतिहासमा कहिल्यै आफ्नो राज्य कस्तो हुन्छ भनेर आत्मबोध नगरेको समुदायले त्यो राज्य पाइसकेपछि कसरी चलाइराखेको छ भन्ने जान्ने उत्सुकता पनि थियो ।
सहरभित्रको एउटा होटलमा चेक–इन गर्ने बेलामा ‘प्रथमे ग्रासे मक्षिका पातः’ जस्तै भयो । खुइलिँदै गरेको तालुमा कपाल कालो पार्ने रसायन चुहिनेगरी लगाएका भद्र देखिने रिसेपस्निष्टले तुलाजीसित भने, ‘कसैले रिजर्भेसन गराएको छैन, तपाईहरूका नाममा ।’ हामी छक्क पर्‍यौं । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीको आतिथि बन्न हिँडेका मान्छे, यहाँ त ‘रिजर्भेसन’ सुद्ध भएको रहेनछ । अनि तुलाजीले आफ्नै नाममा रिजर्भेसन गर्नुभयो । त्यसपछि मात्र ती भलादमीले नेपालीमा भने, ‘मुख्यमन्त्रीको अफिसबाट कसैले फोन गर्‍यो भने कोठा छैन भन्ने गरेका छौँ हामीले । छ महिनाको होटल बिल अहिलेसम्म बाँकी नै छ ।’
होटलमा नुहाइवरी सफा भएर हामी राजनीतिक जमघटमा रातिको खाना खान पुग्यौँ । मुख्यमन्त्रीजीले आफ्ना सिपाहीजस्ता देखिने पहाडी जनजाति मूलका सहायक र बाहुन भान्सेलाई यो ल्याउनुस्, त्यो ल्याउनुस् भनेर हाम्रो सत्कार गरे । आफ्ना सहायकहरूसँग गरेको नेपाली भाषाको शिष्ट प्रयोगले प्रदेश २ मा राज्यमात्रै छैन, भाषाको पनि अर्कै प्रयोग भैराखेको छ भन्ने सोचेर मन प्रसन्न भयो । तर त्यहाँ जम्मा भएका एक राजनीतिज्ञसँगको मेरो कुराकानी त्यति सन्तोषजनक रहेन । मुख्य न्यायधिवक्ता दीपेन्द्र झा, तुलाजी र म भएको ठाउँमा मेरो र ती नेताबीचमै धेरै संवाद भयो ।
राज्य सञ्चालनबारे मेरो मतभिन्नता रह्यो । म आदर्शवादी, ती उनीहरू व्यावहारिक । नेपालमा भ्रष्टाचार व्यापक छ र खर्चिलो चुनाव यसको मुख्य कारण हो भन्नेमा हामी सहमत थियौँ । तर चुनावमा लाग्ने पैसा कसरी आउन सक्छ भन्नेमा मेरो मतभिन्नता थियो । पैसा उठाउने मामिलामा सबै पार्टी भ्रष्ट छन् भन्ने उनको भनाइ । कांग्रेस र नेकपा त शिरदेखि पैतालासम्म चुनावी रकमका मामिलामा भ्रष्ट छन् भन्ने उनी । मेरो भनाइ नयाँ जन्मेका पार्टीहरू कांग्रेस र नेकपाजस्ता हुनुभएन भन्ने थियो । तर ती राजनीतिज्ञ यस कुरामा सहमत थिएनन् । उनी पैसा भएन भने गाउँ–गाउँमा मतदाताका ठेकेदारहरूले जोसँग पैसा बढी छ, उसैलाई भोट दिलाउँछन् भन्ने । मेरो मन खिन्न भयो, राजनीतिको यो घिनौना रूप चुनावी ढाँचाले जन्माएको देखेर । मनमा अनेक कुरा खेलिरहे । नेपाली राजनीतिमा चुनाव लड्न पैसाको जोहो कसरी हुँदोरहेछ भन्ने थाहा भयो । त्यस राति मलाई के थाहा भयो भने भ्रष्टाचार नगरी, कमिसन नखाई यी राजनीतिक पार्टीहरू चाहे जुनसुकै किन नहुन्, चुनाव लड्नै सक्दैनन् । उदेक लागेर आयो ।
होटलको कोठामा आएर पछारिएँ, निकै बेर निद्रा लागेन । भोलिपल्ट मुख्यमन्त्री सहितको सरकारका मन्त्री र सचिव आदिसँग जमघटमा मधेश यात्राबारे केही बोल्नु र अन्तरक्रिया गर्नु थियो । उकुस–मुकुस भइराख्यो । मनमा लागिरह्यो, जनकपुरमा नेपालको फोहोर दलीय राजनीति सफा हुँदैन लागिरह्यो । जहाँ आदर्श छैन, सिद्धान्त छैन, नयाँ गर्ने आँट छैन, त्यहाँ नयाँपनको ढोंग किन गरिरहनु भन्ने भयो मनमा । दलहरूको आय पारदर्शी भएन र त्यसको नियमन गरिएन भने यसले नेपालमा लोकतन्त्रलाई ढिलोछिटो धरापमा पार्छ भन्ने लाग्यो र यही सोच्दै निदाएँ । बिहान उठ्दा सधैंझैं तुलाजी मर्निङ वाकमा गैसकेका थिए । म नित्यकर्म सिध्याउँदै थिएँ । तुलाजीले फोन गर्नुभयो । ‘सर, म सहर घुम्न गएको थिएँ । फर्किंदैछु र साथमा एकजना मित्रलाई भेटाउन ल्याउँदैछु ।’ तुलाजीसित आउनुभएका ती सज्जन रामाशिष यादवका कुरा सुनेपछि भने मेरो मन अलि उज्यालो भयो ।
रामाशिषलाई जानकी मन्दिर र त्यस अगाडिको गंगासागर नाम गरेको विशालकाय पोखरी कुँडाकर्कटले भरिएको देख्दा जहिले पनि दिक्क लाग्थ्यो । ‘ईश्वर त हाम्रो वशमा हुन सक्दैनन् तर हाम्रो प्रयत्न त हाम्रै हातमा छ’ भन्ने लागिरह्यो उनलाई । यही सोचेर एकदिन उनले दुईजना मित्रसँंग कुरा गरे । जानकी मन्दिरको सफाइमा लागौं भने त्यहाँका महन्थले मन नपराउन सक्छन् भनेर रामाशिष तीनजना साथी लिएर एकदिन मन्दिर पछाडिको पोखरीमा पसे र हातैले फोहोर सफा गर्न थाले ।
त्यस्तो पोखरीमा पत्रकारजस्तो पढेलेखेको मान्छे पसेको देख्दा वरपरका मानिस भेला भएछन् र हाँस्न थालेछन् । फोहोर–मैला सफा गर्ने काम त ‘तल्लो जात’का मानिसको हो भन्ने लागेछ, ती दर्शकलाई । यस्ता पढालिखा सम्मानित व्यक्तिले किन यस्तो कसिङगर उठाउने काम गरिराखेको होलान् भन्ने लागेछ, उनीहरूलाई । तर रामाशिष र उनका ती साथीहरूको अठोटमा कुनै परिवर्तन आएन । तर दुई–तीन जनाले त्यत्रो विशाल पोखरी सफा गर्नु असम्भव लाग्यो, रामाशिषलाई । यस्तो सोचेर जिल्ला प्रहरीका १ हजार २ सय जवान ब्यस्त रहे पनि एसएसपी कार्यालयका गोडा २ सय जवानको त्यति काम हुँदैन भन्ने लागेर एकपल्ट एएएसपीलाई भन्न गएछन् । ती वरिष्ठ उपरिक्षक औधि खुसी भएछन् । काम नभएर तिनका जवानहरूलाई पट्टाइ लागिराखेको थियो । प्रत्येक साता ती प्रहरी जवान भिडे गंगासागर सफा गर्न । त्यसरी नै रामाशिषले सशस्त्रको एसपी र सेनाका कर्णेललाई भनेपछि ती पनि सहयोग गर्न राजी भए । विद्यालय संगठन प्याबसनलाई सम्पर्क गरेर स्कुले बालबालिकलाई साताको दुई दिन सहभागी गराए । पोखरीका विभिन्न डिलहरू विभिन्न समूहलाई जिम्मा लगाए । एउटा डिल सशस्त्रलाई, अर्को सेनालाई, अर्को प्रहरीलाई ।
एकदिन एउटा विद्यालय, अर्को दिन अर्को विद्यालयलाई । यसैगरी दिन र स्थान विभाजन गरे रामाशिष र तिनका साथीहरूले । फेरि पोखरी सफा गर्न चुना, कोदालो–फरुवाजस्ता सरसामान पनि चाहिन्थ्यो । त्यसका लागि तिनले आफ्ना व्यापारी र उद्योगपति मित्रहरू गुहारे । सबैले सहयोग गरे । यति भइसकेपछि सहरवासीले रामाशिषले राम्रै काम गरेका रहेछन् भन्न थाले र ती पनि सघाउन आउन थाले । तर यी सबै सफाइ अभियानका दौरान रामाशिषले एकपैसा पनि कसैसंग लिएनन् । पैसा लिएपछि हात फोहोर हुन्छ र मानिसमा शंका–उपशंका जन्मिन थाल्छ भन्ने लाग्यो तिनलाई । त्यसैले उनी कसैले आफू आउनुको सट्टा पैसा दिन्छु भन्दा, रामाशिषले ‘या त आफै आएर श्रमदान गर्नुस् या चाहिएको सरसामान (कोदालोदेखि चुना) दिनुस्, पैसा लिंदैनौं’ भनेर फर्काइदिन्थे । यसले गर्दा आम मानिसमा विश्वास जाग्न थाल्यो । गर्दा हुने रहेछ भन्ने लाग्न थाल्यो । र पोखरी सफा भयो ।
यसरी गंगासागरलाई सहरका सरकारी र गैरसरकारी स्रोतको परिचालन गरेर सफा त गरे, तर त्यस सफा पोखरीको जगेर्ना कसरी गर्ने ? सहरमा फोहोर व्यवस्थापनको राम्रो प्रबन्ध नहुँदा आममानिस खोलानाला, पोखरीमै फोहोर फाल्छन् । त्यसैबीच तिनका सहयोगीहरूले चन्दा उठाउनुपर्छ भने मान्छे राख्नलाई । तर रामाशिषको मनमा अर्कै विचार आइसकेको थियो । तिनले चन्दा उठाउन मानेनन् । पैसाको खेल भएपछि गडबड हुने सम्भावना र सहरवासीमा पैसा खायो भन्ने मनमा पस्न सक्छ भयो उनको मनमा ।
तर चन्दा नउठाई गंगासागरको सरसफाइ कायम कसरी गर्ने ? तिनले जनकपुर वरपरका पण्डितहरूको भेला गर्न सोचे र निम्तो पठाए । पण्डितहरू सयौंको संख्यामा आए र तिनले बनारस र हरिद्वारजस्तै गंगा आरती गराउने सल्लाह दिए । तर नित्य प्रतिदिन आरती गर्ने पैसा कहाँबाट आउँछ ? रामाशिषको आफ्नो तलबको केही भाग र दुईजना साथीको पैसाले तीनजना पण्डित एक महिनाका लागि राख्ने विचार गरे । २०७० सालमा भएको उद्घाटनका दिन ६० हजारजति मानिस भेला भए । गंगा आरती सुरु भयो । भक्तजनले दानपेटिकामा पैसा खसाल्न थाले । रामाशिषले बैंकमा पोखरीका नाममा खाता खोले । यसरी सुरु भएको आरतीबाट हुने आम्दानीले पण्डितलाई तलब पनि दिनपुग्यो र पोखरी सरसफाइ पनि जारी रह्यो । आजपर्यन्त यो कार्यक्रम जारी छ र गंगासागर पोखरी सफा छ ।
रामाशिषजीको यो कथा सुनेपछि मलाई जनकपुर मात्रै होइन, नेपालको जस्तोसुकै ठाउँमा पनि रामाशिष जस्ता मानिस हुनसक्छन्, जो आफ्नो समाज र देशलाई निस्वार्थ भावले सेवा गरेर अगाडि बढाउने मनसाय राख्छन् भन्ने लाग्यो । र सानै प्रयास भए पनि आ–आफ्नो समाज, सहर, गाउँ राम्रो बनाउन लागेका होलान् । मानिसले अठोट गर्‍यो भने जे पनि सम्भव छ भन्ने मनमा आस पलायो ।
रामाशिष भने जनकपुरवासीको प्रबल आग्रहमा प्रादेशिक राजनीतिमा होमिएका छन् अहिले । अब आउने दिनमा तिनले राजनीतिको गंगासागरलाई कसरी सफा गर्छन्, यो हेर्न भने बाँकी छ । तर रामाशिष जस्ता मानिसले गर्दा गाउँ–सहर मात्रै नभई मुलुकको राजनीति पनि अवश्य सुध्रेला भन्ने आशा अझै छ, मरिसकको छैन ।
मिश्र अमेरिकास्थित लुइस विश्वविद्यालयमा अंग्रेजीका विभागाध्यक्ष हुन् ।
प्रकाशित : फाल्गुन १०, २०७६ ०८:३६
फाल्गुन १०, २०७६ शशी बस्नेत
एसिड आक्रमण महिला विरुद्धको हिंसाका विभिन्न स्वरूपहरूमध्ये एक हो । यस्तो अपराधमा महिला वा पुरुष जोकोही पीडित हुनसक्छ । महिला विरुद्धका अन्य हिंसाभन्दा एसिड हिंसाको प्रकृति फरक देखिन्छ । यसमा आक्रमणकारीको मुख्य उद्देश्य महिलालाई कुरूप पार्ने हो । महिलामाथि हुने एसिड आक्रमण परम्परागत पितृसत्तात्मक सोचको उपज हो । यस सोचका कारण महिलालाई व्यक्ति होइन, सामग्रीमा रूपमा लिइन्छ ।
नेपालमा भएका घटनाहरूको अध्ययन गर्दा किशोरी तथा युवतीहरूप्रति लक्षित गरी एसिड आक्रमण गर्ने गरेको पाइन्छ । यो समस्याबाट विशेषगरी विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा पढ्ने किशोरी बढी आतंकित छन् । भारत र बंगलादेशले विशेषतः कानुन तथा नियमहरू बनाएर यो समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा एसिडजन्य पदार्थको बिक्री–वितरणलाई नियन्त्रण तथा नियमन गर्न राज्यले त्यति पहल गरेको छैन । यसले बालिका र महिलाहरूको मानवअधिकार उपभोगमा पनि गम्भीर क्षति पर्‍याएको छ ।
२०७२ सालअघि एसिड आक्रमणको स्पष्ट कानुनी व्यवस्था थिएन । एसिड आक्रमणलाई अपराधीकरण गर्न मुलुकी ऐन २०२० को कुटपिटको महलको दफा १४ क. थपिएको थियो । जस अनुसार तेजाब वा यस्तै प्रकारका अन्य पदार्थले पोली, डामी, दली, घसी जीउमा पीडा गराएमा वा अनुहार वा शरीरको कुनै अंग कुरूप पारेमा कसुरको प्रकृति हेरी सजाय दिइनेछ । कुरूप पारेमा ५ वर्षदेखि ८ वर्षसम्म कैद र १ देखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, त्यस्तै शरीरको अन्य अंग कुरूप पारेमा वा जीउमा पीडा गराएमा ३ देखि ८ वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । र, जरिवाना बापतको सम्पूर्ण रकम पीडितलाई दिइने उल्लेख छ ।
घरेलु हिंसा ऐन, २०६६ को दफा २(ग) मा ‘शारीरिक यातना’ भन्नाले कुटपिट गर्ने, गैरकानुनी थुनामा राख्ने, शारीरिक चोट पुर्‍याउने, तेजाब वा यस्तै प्रकारका अन्य पदार्थ छर्किई वा सो पदार्थले पोली, डामी, दली, घसी जीउमा पीडा गराउने वा अनुहार वा शरीरको कुनै अंग कुरूप पारिदिने वा यस्तै अन्य कुनै काम गर्ने वा गराउने कार्य सम्झनुपर्छ’ भन्ने परिभाषा थपिएको छ ।
२०७५ भदौ १ देखि लागू भएको मुलुकी अपराधसंहिताको दफा १९३ अनुसार कसैले पनि तेजाब वा अन्य रासायनिक, जैविक वा विषालु पदार्थ छर्किई अनुहार वा शरीरको कुनै अङ्ग कुरूप पार्ने काम गर्नु वा गराउनु हुँदैन भन्ने उल्लेख छ ।
कसैले यस्तो कसुर गरे कसुरको प्रकृति हेरी अनुहार कुरूप पारेमा ५ देखि ८ वर्षसम्म कैद र १ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र शरीरको अन्य अङ्ग कुरूप पारेमा वा शरीरमा पीडा पुर्‍याएमा ३ देखि ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । जरिवाना बापत प्राप्त पूरै रकम पीडितलाई क्षतिपूर्ति बापत दिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
आजभोलि नेपालमा जोसुकैले सहजै एसिड खरिद–बिक्री, ओसारपसार गर्न सक्छन् । बिक्री–वितरणमा अनुगमन गर्ने राज्यको कुनै नीति–नियम छैन । एसिडको सहज प्राप्तिले दुरुपयोग पनि सहज बनाएको छ । यसको उत्पादन मानव सुविधा र आवश्यकता परिपूर्तिका लागि भएको हो । तर दुरुपयोग गर्दा मानव शरीरलाई हानि गरेको छ । एसिडको बिक्री–वितरणमा नियन्त्रण र अनुगमनको आवश्यकता टड्कारो छ । खासगरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्युरिक एसिड तथा नाइट्रिक एसिडको बिक्री–वितरण सरकारबाट अधिकार प्राप्त पसलबाट हुन जरुरी छ । यी एसिड बिक्री गर्दा खरिदकर्ताको परिचय, उमेर खुल्ने रेकर्ड राख्ने व्यवस्था गरिएमा पनि दुरुपयोग हुनबाट जोगिन सकिन्छ ।
कुनै पनि महिला, बालिका तथा अन्य व्यक्तिमाथि हुने हिंसालाई अन्त्य गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । सर्वोच्च अदालतबाट २०७४ साउन २५ गते एसिडको उत्पादन, ओसारपसार, बिक्री तथा वितरण सम्बन्धमा नियमनकारी प्रबन्धन साथै एसिड आक्रमणबाट बच्ने उपाय र यसको असर, प्राथमिक चिकित्सा, औषधोपचार केन्द्र समेतका बारेमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि राज्यले विशेष व्यवस्था गर्नु भनी परमादेश जारी भैसकेको छ । तैपनि हालसम्म सरकारले एसिड बिक्री–वितरणमा नियमन गरेको छैन । सर्वोच्च अदालतको फैसलाको कार्यान्वयन गर्दै सरकारले एसिडको बिक्री–वितरणमा अनुगमन तथा उचित नियन्त्रण गरेमा सम्भावित अपराधलाई रोक्न सक्छ । पीडकलार्ई कडा सजाय दिने आफ्नो ठाउँमा छ । सँंगसँंगै घटना हुने वातावरण सिर्जना हुन नदिनु पनि राज्यको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ ।
प्रकाशित : फाल्गुन १०, २०७६ ०८:३४
डा. रवि शाक्य